MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နောက်ဆုံးအခြေအနေ (ဆောင်းပါး)
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နောက်ဆုံးအခြေအနေ (ဆောင်းပါး)
သြဂုတ်လ (၂၇-၂၉) အတွင်း ဖားကန့်မြို့ဖြစ်စဉ်များ၏ နောက်
နားလည်ရန်ခက်ခဲလှသော၊ ရှုပ်ထွေးလှသော မီဒီယာအများအပြား ကြောင့် ဖြစ်စဉ်များကို သေချာမသိလိုက်ရသော တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များထံသို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု ဖြစ်သော ကချင်လူမျိုးများ၏ လက်ရှိအခြေအနေများကို ကချင်တမျိုးသား လုံးကိုယ်စား ဤဆောင်းပါးဖြင့် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အများအပြား၏ သံသယများနှင့် လှည့်စားခံနေရ သော ကချင်ပြည်နယ် လက်ရှိအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းစွာ သိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ (အထူးသဖြင့် အနောက် နိုင်ငံများ) မှ အမြဲမေးခွန်းထုတ်လိုနေသော မေးခွန်းမှာ
- မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အားလုံး သမ္မတ သိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေ ရနေပြီ။ KIO/KIA က ဘာကြောင့် တိုက်ပွဲတွေကို ဆက်ပြီး ဖန်တီးနေလဲ? ဆိုတာပါ။
ဤမေးခွန်းကို မေးခြင်းမှာ ကချင်ပြည်နယ်၏ အခြေအနေမှန်ကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ မတွေ့ရဘဲ၊ သေချာစွာ မသိသောကြောင့်ဟု ကချင်တမျိုးသားလုံးက ယူဆပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဤမေးခွန်းကို ပြန်လည်ခြေရာခံ စဉ်းစားကြည့်မည်ဆိုပါက သိန်းစိန်အစိုးရသည် ၄င်းတို့၏ အာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင်ရှိသော ၄င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားများ တည်တံ့စေရန် KIO/KIA အား အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းနိုင်ရန် ကြိုးစားခြင်းမှာ အဓိက အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ တိုက်ပွဲများတွင်လည်း အဖျက်စွမ်းအား ပိုမိုကြီးမားလာသော၊ ပိုမိုပြင်းထန်လာသော လက်နက်များကို အသုံးပြုလာခြင်းဖြစ်သည်။
KIO/KIA မှ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် သိန်းစိန်အစိုးရအား တိုက်ခိုက်နေရပါသနည်း။ အကြောင်းအရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမည်။
(၁) လက်ရှိ စစ်ခေါင်းဆောင်များသည် မည်သည့်အခါတွင်မှ ယုံကြည်ထိုက်သူများမဟုတ်။
(၄င်းတို့၏ အမြဲတမ်းလှည့်စားလိုသော စိတ်သဘာဝအရ)
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောင်နိုင်မည်ဟု အခြားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနည်းတူ ကချင်တမျိုးသားလုံးလည်း မျှော်လင့် ခဲ့ကြပါသည်။
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး (KIO/KIA, KNU, SSA အစသဖြင့်) ဦးသန်းအောင်၊ ဦးသိန်းဇော်၊ ဦးအောင်မင်း အသီးသီး ဦးဆောင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူ စာချုပ်များလည်း ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ စစ်အစိုးရမှ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ရေး သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ပြီဟု တရားဝင်ကြေညာပြီးမှ ၅လ/၆လ အလွန်တွင် စာချုပ်ကို ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပင် ဖောက်ဖျက်ကာ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း (၂) ဖွဲ့ကို ပြန်လည် ကျူးကျော်တိုက်ခိုက် လာခဲ့ပါသည်။
စာရွက်ပေါ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးချက်၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးများသည် မည်သည့်အခါတွင်မှ အကောင် အထည်ဖော်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဤဆွေးနွေး ချက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များ၏ နှုတ်သဘော တူညီချက်သာဖြစ်ပြီး၊ လွတ်တော်မှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့်အဆင့်ကို မည်သည့်အခါမှ ရောက်ရှိလာမည် မဟုတ်ဆိုသည်မှာ ရှင်းနေပါသည်။
(၂) ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပနေစဉ်၊ အခြားတစ်ဖက်မှ လူမျိုးတုန်းစစ်ပွဲများ ဖန်တီးနေခြင်း
ကချင်တမျိုးသားလုံးကို စစ်အာဏာရှင်များ၏ လူမျိုးတုန်း ချေမှုန်းရေး စစ်ဆင်ရေးအန္တရာယ်မှာ ခြိမ်းခြောက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကျေးလက်ဒေသများတွင် မြန်မာစစ်သားများ၏ နိုင်ထက်စီးနင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ပြင်းထန်စွာ ကြုံတွေ့ ခံစားနေရ ပါသည်။ အိမ်များကို မွေနှောက်ရှာဖွေ၍ ရှိသမျှ ပစ္စည်းဥစ္စာများကို လုယက်သွားကြသည့်အပြင်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ (ကြက်၊ ၀က်၊ နွား) ပါမကျန် သတ်ဖြတ်စားသောက်သွားကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများအပေါ် အုပ်စုလိုက်မုဒိန်းမှုများ ကျူးလွန်လျက်ရှိပြီး၊ အမျိုးသားများကို နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်လိုက်ကြပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကချင်အမျိုးသားများ အတွက် လုံခြုံစိတ်ချ ဘေးကင်းသောနေရာဆိုသည်မှာ မရှိတော့ပါ။ နီးစပ်ရာဆွေးမျိုးများရှိသော မြို့များ၊ နယ်စပ်ဒေသများသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြရပါသည်။
- ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် သိန်းစိန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီကို ဦးဆောင်သွားမယ်လို့ ဘာကြောင့် ယုံကြည်နေကြတာလဲ?
- သမ္မတသိန်းစိန်ဟာ တစ်ဖက်က မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအရေး ဆိုပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ ဆက်ဆံပြနေတာ၊ တစ်ဖက်ကလည်း လူမျိုးတုန်းစစ်ပွဲတွေ ဖန်တီးနေတာကို ဘာလို့ နားမလည်ကြတာလဲ?
ယနေ့အချိန်တွင် သိန်းစိန်အစိုးရသည် စစ်အစိုးရအတွက် ကချင်ပြည်နယ်တွင် ၅၀% အထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန် ကြိုးပမ်းနေစဉ်အတွင်းမှာပဲ တစ်ဖက်က ကချင်လူမျိုးများကို သုတ်သင်ချေမှုန်းနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီ ရရှိခဲ့လျှင်တောင်မှ ကချင်လူထု၏ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ယုံကြည်ချက်အစရှိသည်တို့နှင့် သဟဇာတဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ပင် KIO/KIA မှ သိန်းစိန်အစိုးရ အပေါ် မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သိန်းစိန်အစိုးရအနေနှင့် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းနေသည်ဆိုပါက ကချင်လူမျိုးများနှင့်လည်း သဟဇာတ ဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းသင့်ပါသည်။
(၃) ဖားကန့်ဖြစ်စဉ်၏ အဓိကအကြောင်းရင်း
KIO/KIA နှင့် စစ်အစိုးရတို့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤသဘောတူ ညီချက် ကာလများတွင် KIA အနေဖြင့် လက်နက်ချခဲ့ခြင်း မရှိသော် လည်း၊ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ရန်မှအပ စစ်ရေးအတွက် လက်နက်ကို အသုံးချခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် KIA သည် ကာကွယ်ရေးစွမ်းဆောင် ရည်များ တဖြည်းဖြည့်လျော့နည်းလာပြီး အမိန့်အာဏာအရှိန်အ၀ါများ လည်း တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။
ဖားကန့်ဒေသကိုလည်း စစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်များ၏ အကျိုးတူ ကုမ္ပဏီများလက်အောက်သို့ ထိုးအပ်လိုက်ရပါသည်။ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ သူဌေးကြီးများ ရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် ပါဝင်လာကြသော် လည်း KIO/KIA အနေဖြင့် ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းမှ အကျိုးခံစားခွင့်မရှိခဲ့ပါ။ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ ဖားကန့်ဒေသကို မူးယစ်ဆေးမျိုးစုံ စတင် မိတ်ဆက်လာခဲ့ပါသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ KIO/KIA မှ အခွန်သဘောမျိုးစတင် ကောက်ခံခြင်းမှ အခြေတည်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများမှ KIA သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏကို ပေးဆောင်ရန် သဘောတူညီပြီးချိန်တွင် စစ်အာဏာပိုင်များမှ ဖားကန့်ဒေသရှိ ကုမ္ပဏီအားလုံး မိုးတွင်းကာလ အလုပ်ရပ်နားရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့မှုကြောင့် ဖားကန့်ဒေသတွင် အလုပ်လက်မဲ့ များအလွန်များပြားလာခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆင်းရဲသား လူတန်းစား များမှာ နီးစပ်ရာ ကုမ္ပဏီများ၏ စွန့်ပစ်မြေစာများမှ ရေးမဆေးကျောက် များရှာကြရသလို၊ ဖားကန့်အခြားဒေသများသို့ ချဲ့ထွင်ပြီး ရေးမဆေး ဘ၀များ ဖြစ်ကုန်ပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာများကို အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းပိုင် ကုမ္ပဏီမှသိသောအခါ ၄င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်သဖြင့်၊ မိမိတို့နယ်မြေ လုံခြုံရေးဟု အကြောင်းပြကာ ဖားကန့်ရှိ အာဏာပိုင်များထံ တင်ပြလာပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် KIA တို့ သြဂုတ်လ (၂၄) ရက်မှ စတင်ပြီး ထိပ်တိုက် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တိုက်ပွဲအတွင်း ကုမ္ပဏီမှလည်း ထိခိုက် ဆုံးရှုံးမှု အများအပြားကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ စစ်တပ်နှင့် အကျိုးတူ ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ရပ်ကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။
KIO/KIA ၏မူဝါဒမှာ ဆင်းရဲသားများ အခွင့်အလမ်းရရှိစေရန် တပိုင်တနိုင် လုပ်ခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် စစ်တပ်အကျိုးတူ ကုမ္ပဏီများမှ စစ်တပ်နှင့် ပူးပေါင်းကာ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး လုပ်ခိုင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်သားအားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် KIA မှ စစ်အာဏာရှင်များကို တွန်းလှန်တိုက်ထုတ်နေရခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
(Jinghpawkas.blogspot.com မှ LAST SITUATION IN HPAKANT, KACHIN STATE ကို ဆီလျော်အောင်ပြန်ဆိုသည်။)
at 9/03/2012 11:45:00 AM